ေျခညႇိုးက ေျခမထက္ ပိုရွည္ေနတဲ့သူဆို ဒါကို ဖတ္ျဖစ္ေအာင္ ဖတ္ၾကည့္ပါ
September 10, 2021 sonsonlinlin 0
ခြေညှိုးက ခြေမထက် ပိုရှည်နေတဲ့သူဆို ဒါကို ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ကြည့်ပါ ခြေညှိုးက ခြေမထက် ပိုရှည်နေတဲ့သူဆို ဒါကို ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ကြည့်ပါ ခြေညှိုးက ခြေမထက်ရှည်နေတဲ့ သူတွေကတော့ အောက်ပါ အချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီသူတွေပဲ ဖြစ်တာ တွေ့ရမှာပါ..။ ၁။ အချစ်ကြီးတယ် အစွဲအလမ်းကြီးတယ် ခံစားလွယ်တယ်..။ ၂။ အငြိုးကြီးတယ် ရန်ငြိုး ထားတတ်တယ်..။ ၃။ ချစ်သူကို ဦးစားပေးတယ် ချစ်သူကိုလည်း အနိူင်ယူတယ်..။ ၄။ ချစ်ပြီဆို […]
မိန္းကေလး သူငယ္ခ်င္း ႏွစ္ေယာက္ ဆုံမိၾကတဲ့အခါ လူမသိသူမသိ ျပဳလုပ္တတ္ၾကတဲ့ အရာေတြ
အရမ်းခင်ကြတဲ့ bff သူငယ်ချင်း မိန်းကလေးနှစ်ယောက် ဆုံမိကြပြီဆိုရင် ဘယ်လို ပေါက်ကရနိုင်တဲ့ အပြုအမူတွေ ပြုလုပ်တတ်ကြလဲ ဆိုတာကို စဉ်းစားမိကြလား။ မိန်းကလေးတွေ ဖြစ်လို့ အတင်းတွေပြောကြမှာပဲ ဆိုတာတော့ မှန်ပေမယ့် တခြားဘယ်လို လူမသိသူမသိ လျှို့ဝှက်စွာ ပြုလုပ်တတ်ကြတဲ့ ပေါက်ကရအပြုအမူတွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်။ ဘာတွေလဲဆိုတော့… (၁) သန့်စင်ခန်းတူတူသွားကြတယ် မိန်းကလေးအများစုက သန့်စင်ခန်းသွားရင် တစ်ယောက်ထဲ သွားတာခပ်ရှားရှားပါပဲ။ တစ်ယောက်က အပြင်မှာ ရပ်စောင့်ပေးတာမျိုး၊ သန့်စင်ခန်းထဲက မှန်ကို တူတူကြည့်ပြီး […]
ရေမြောင်းအနီးမှာ လဲလျောင်းနေတဲ့ အင်အားချည့်နဲ့နေတဲ့အဘွားအိုတစ်ဦးအား ကယ်ဆယ်ပေးခဲ့တဲ့ လုံခြုံရေးအစောင့်တစ်ဦး
ထိုင်းနိုင်ငံ Pathum Thani ပြည်နယ် ဘန်ကောက်မြို့အနီးရှိ တံတားတစ်ခုအောက်၌ ရေမြောင်းမှာ အထားခဲ့ခံခဲ့ရတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုအမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့သတင်းကို တနင်္လာနေ့ (စက်တင်ဘာ ၆ ရက်) မှာ Shin Min Daily News သတင်းက ပြန်လည်ဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။ တံတားအောက်ရှိ ရေမြောင်းအနီး ကြီးမားတဲ့ကြော်ငြာစာရွက်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာ လဲလျောင်းနေခဲ့တဲ့ အမည်မသိသက်ကြီးရွယ်အိုအမျိုးသမီးတစ်ဦးကို လုံခြုံရေးအစောင့်တစ်ဦးက အမှတ်မထင်တွေ့သွားခဲ့ပြီး သူမကို ချက်ချင်းကယ်ဆယ်ကာ ရဲများကိုလည်း အကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် ထိုနေရာရှိ အဆိုပါအင်အားချည့်နဲ့ကာ ပိန်လှီနေတဲ့အဘွားရဲ့ […]
ခေါင်းလျှော်ရည်ထဲ ဆားထည့်လျှော်ခြင်းဖြင့် ရရှိလာမည့်အကျိုးကျေးဇူးနှင့် အသုံးပြုပုံနည်းလမ်း
ခေါင်းလျှော်ရည်ထဲ ဆားထည့်လျှော်ခြင်းဖြင့် ရရှိလာမည့်အကျိုးကျေးဇူးနှင့် အသုံးပြုပုံနည်းလမ်း ခေါင်းလျော်ရည်ထဲဆားထည့်လျော်ခြင်းဖြင့်ရရှိလာမည့်အကျိုး ကျွန်တော်အားလုံး ဆားကို အိမ်က မီးဖိုချောင်ထဲမှာရနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းအဖြစ် လူတိုင်းသိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆားမှာ ကျွန်တော်တို့တွေ မသိသေးတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေများစွာရှိနေတာကိုတော့ လူသိနည်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆားကို ခေါင်းလျော်ရည်ထဲမှာ ထည့်လျော်တဲ့အခါ ရရှိလာမည့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ ၁ – ဆံပင် ရှည် ဖို့အတွက်အားပေး ပင်လယ်က ရတဲ့ဆားဟာ ဆံပင်ရှည်ဖို့အတွက်အရမ်းကောင်းမွန်ပါတယ်။ ဆံပင်ကျွတ်တာတွေ ခံစားနေရသူအတွက် ပင်လယ်ဆားနဲ့ခေါင်းလျော်ပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ လွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းကတော့ […]
စက်ဆွဲစရာမလိုပဲ ဆံပင်ကို ပျော့ပျောင်းစေမယ့်နည်းလမ်း မိန်းကလေးတွေတော်တော်များများက ဆံပင်ကို ကောက်လိုက်ဖြောင့်လိုက်လုပ်ကြတာများပါတယ်။ တချို့က ဆံပင်ရေလှိုင်းပုံလေးတွေလုပ်တာကို ကြိုက်ကြတယ်။တချို့ကျ ဖြောင့်စင်းနေတဲ့ ဆံပင်ကို ကြိုက်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖြောင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆံပင်ကို စက်နဲ့ဆွဲပြီးလုပ်ရတာမလို့ ဆံကေသာကို အနည်းနဲ့ အများတော့ ပျက်ဆီးစေမှာပါ။ အဲ့လိုမျိုးတွေ မဖြစ်ရအောင် ဆံကေသာကို ဖြောင့်စင်းချင်သူများအတွက် သဘာဝအတိုင်းပေါင်းတင်နည်းလေးကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ ပေါင်းတင်တာဆိုတဲ့အတွက် ခေါင်းလျှော်သလို လျှော်လို့မရပါဘူး။ဆံကေသာမှာ နှံအောင်လိမ်းထားပြီးမှ အချိန်တစ်ခုထားပြီး လျှော်ရမှာပါာပထမဆုံး ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတာ ပြောပြပါမယ်။ […]
ဆံေကသာထိခိုက္ပ်က္စီးေစတဲ့ သင္အျမဲလုပ္မိတဲ့အမွား ၁၅ ခု
ဆံကေသာဆိုတာ ကျွန်မတို့ မိန်းမသားတွေအတွက် ဒုတိယမျက်နှာပါပဲ။ ဆံကေသာကျန်းမာသန်စွမ်းမှ သင့်ကိုပိုပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိစေမှာဖြစ်သလို ယုံကြည်မှုလည်းရှိစေမှာပါ။ ဆံသားထိခိုက်ပျက်စီးစေတဲ့ သင်အမြဲလုပ်မိတဲ့အမှား ၁၅ ခုကို မျှဝေပေးပါမယ်။ ၁။ ခေါင်းလျှော်ရည် သင်နဲ့မတည့်တဲ့ ခေါင်းလျှော်ရည်ကိုသုံးတာဟာ သင့်ကိုဆံကေသာထိခိုက်ပျက်စီးစေပါတယ်။ သင့်ဆံကေသာနဲ့သင့်တော်တဲ့ ခေါင်းလျှော်ရည်ကိုသုံးပါ။ ၂။ ခေါင်းမကြာခဏလျှော်ခြင်း (သို့) ခေါင်းမလျှော်ခြင်း ခေါင်းကို မကြာခဏလျှော်ပေးတာဟာလည်း ဆံကေသာအတွက်မကောင်းသလို ခေါင်းကို အကြာကြီးနေမှ တစ်ခါလျှော်ပေးတာကလည်း ဆံကေသာကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေပါတယ်။ ဆံကေကာကို ၂ ရက်ခြား […]
အဆီဖုတွေထပ်မပေါက်အောင် ပြုလုပ်နိုင်သော သဘာဝနည်းလမ်းများ…
အဆီဖုတွေထပ်မပေါက်အောင် ပြုလုပ်နိုင်သော သဘာဝနည်းလမ်းများ အဆီဖုတွေထပ်မပေါက်တော့အောင် ဒါလေးတွေလည်းလုပ် Skin care လည်း ခနခနမပြောင်းနဲ့( တည့်နေရင်မပြောင်းနဲ့တော့) ဘာတွေ လုပ်သင့်လဲ?ဒီအချက်သေးသေးလေးတွေကို လိုက်နာကြည့်ပါ ၁. ရေများများသောက်ပါ. ၂. ဝမ်းမချုပ်စေပါနဲ့ ၃. အဆင်ပြေနေတဲ့ Skincare ကို ခဏခဏ မပြောင်းချင်ပါနဲ့ ၄. တစ်ပတ်တစ်ခါ ခေါင်းအုံးစွပ်လေး လဲပေးပါ ၅. ဖုန်း screen ကို အရက်ပြန်လေးနဲ့ တစ်နေ့တစ်ခါ သန့်ရှင်းပေးပါ ၆. […]
ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်ကို လျှော့ချဖို့အတွက် လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်တာ၊ အစားလျှော့စားတာ အစရှိသဖြင့် နည်းလမ်းပေါင်းများစွာမှ အခုနောက်ပိုင်း နိုင်ငံတကာမှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ နည်းလမ်းတခုကတော့ ရေကိုအသုံးပြုပြီး ဝိတ်ချတဲ့နည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းမှာဆိုရင်လည်း သူ့ရဲ့အားသာချက်တွေ အားနည်းချက်တွေကတော့ ရှိနေပါတယ်။ အားသာချက်ကတော့ သွေးပေါင်ချိန် မြင့်တက်ခြင်း၊ ကိုလက်စထရော များပြားခြင်းနဲ့ အဝလွန်ခြင်းတွေအတွက် ထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်းတခုဖြစ်တယ် ဆိုတာပါပဲ။ အားနည်းချက်ကတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ နို့တိုက်မိခင်သည်တွေ၊ နှလုံးကျန်းမာရေး ပြဿနာရှိသူတွေအနေနဲ့တော့ အလွန်အကျွံ မလုပ်သင့်တဲ့ […]
ဆံပင် ပေါင်းတင်ဖို့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင် အသုံးပြုနေကျ ခေါင်းလျှော်ရည် ထဲကို ဒါတွေရောစပ်ထားလိုက်ပါ
ဆံပင် နှစ်ခွဖြစ်ခြင်း၊ ဆံသားပျက်စီးခြင်းနဲ့ ဆံပင်အရောင် မွဲခြောက်ခြောက်ဖြစ်ခြင်းစတာတွေက မကြာခဏဆံပင်ပုံစံပြောင်းလဲသူတွေ ကြုံတွေ့ရတဲ့ ပြဿနာရပ်တွေပါ။ ဆံပင် ကောက်လိုက်၊ ဖြောင့်လိုက်၊ အရောင်ဆိုးလိုက်နဲ့ အမျိုးမျိုး ပြုလုပ်နေတာကြောင့် ဆံသား များ ပျက်စီးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက် ဆံပင် ပေါင်းတင် ဖို့အတွက် အချိန်သီးသန့်ပေးပြီး အလုပ်ရှုပ်ခံစရာမလိုဘဲ ခေါင်းလျှော် လိုက်ရုံနဲ့ အကျိုးထူးရရှိနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်း လေးကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ အသုံးပြုနေကျ ခေါင်းလျှော်ရည် ထဲကို ဆံသား ကျန်းမာ လှပစေတဲ့ […]
လင်မယား ဖြစ်ရခြင်း အခြေခံအကြောင်းရင်း (၂) မျိုး ၁။ ပုဗ္ဗသန္နဝါသ – ရှေ့ဘဝ၊ ဘဝ မှ လင်မယားဖြစ်ခဲ့ရဖူးသောကြောင့် လင်မယားဖြစ်ရ၏။ ၂။ ယခုဘဝတွင် တစ်ဦး၏အကျိုးကို တစ်ဦးက စေတနာအပြည့်နှင့် သယ်ပိုးဆောင်ရွက်ခဲ့ဖူးခြင်းကြောင့် လင်မယားဖြစ်ရ၏ အောက်ပါအချက်များနှင့် တူညီတဲ့ အကြင်လင်မယားဖြစ်ပါက/သမ္မသဒ္ဓါ – သဒ္ဒါတရားချင်းတူညီ/ သမသီလာ – အကျင့်ချင်းလည်းတူညီ/သမစာဂါ – စွန့်ကြဲပေးကမ်းမှုချင်းလည်း တူညီ သမပညာ – အယူအဆ၊ အတွေးအခေါ်၊ […]